ဖား​ဆောင်းမြို့နယ်​ ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ နှင့် လူငယ်​အဖွဲ့များ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ သွား​ရောက်ဆောင်ရွက် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဖား​ဆောင်းမြို့နယ်​ ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ နှင့် လူငယ်​အဖွဲ့များ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ သွား​ရောက်ဆောင်ရွက်
၅. ၉. ၂၀၁၈. ရက်​​နေ့ နံနက်​ ၉ နာ၇ီခန့်​အချိန်​တွင်​ ကယားပြည်​နယ်​​ဘောလခဲခရိုင်​ ဖား​ဆောင်းမြို့နယ်​တွင်​ သံလွင်​မြစ်​​ရေ မြင့်​တက်​မူ​ကြောင့် မြစ်​ကမ်း​ဘေးတွင်​ နစ်​မြုပ်​လျက်​ရှိ​သော လူ​နေအိမ်​များအား ဖား​ဆောင်းမြို့နယ် ​​မြေခံတပ်​ရင်း ခလရ ၁၃၅ နှင့် ၁၃၄ ပြည်​သူရဲတပ်​ဖွဲ့ဝင်​များ၊ မီးသတ်ကြက်​​ခြေနီတပ်​ဖွဲ့ဝင်​များ၊ ဌာနဆိုင်​ရာဝန်​ထမ်းများ၊ ဖား​ဆောင်းမြို့နယ်​ ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ ဦးခင်​​မောင်​ညိုနှင့် လူငယ်​အဖွဲ့များ သွား​ရောက်​၍ ကယ်​ဆယ်​​ရေးလုပ်​ငန်းများ သွား​ရောက်​​ဆောင်​ရွက်​ခဲ့ကြ​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​။ ​ရေက မနက်​ဖန်​ ဆက်​တက်​​နေမယ်​ဆိုရင်​ စိုးရိမ်​ရတယ်​လို့ ​ဒေသခံတစ်​ဦးမှ ​ပြောကြား​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​။ ဖား​ဆောင်းမြို့နယ်​ ​ရွှေပြည်​တော်သို့ ပရဟိတလူမူကူညီ​ရေးအသင်းကြီးမှလည်း အားကြိုးမာန်​တက် ပါဝင်​ကူညီလျှက်​ရှိ​ကြောင်း သိရှိရပါသည်.။
Mwe Sithu Mwe Sithu
← မွန်ပြည်နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အမျိုးသမီးညီလာခံအကြို နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပ →
October 9, 2018 USDP 2016 Comments Off on ဗဟိုအမျိုးသမီးညီလာခံကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြု သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများစုပေါင်းဆောင်ရွက်